Posted by မြတ်လေးငုံ at Wednesday, September 24, 2014 Links to this post
ပြည်သူလူထု ခေါင်းဆောင် တဦး က လက်ညှိုးထိုးပြီးမေးမြန်းနိုင်တယ်
မြန်မာပြည် ရဲ့ အနာဂတ် ကို ကမ္ဘာ မှာ မော်ပြနိုင်ဘို့ ၂၀၁၅ မှာ မည်သူသာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့
သမ္မတ ဖြစ်သင့် ပါသနည်း...။
အာဏာရှင် ခေါင်းဆောင်ကြီး ကျတော့ သူများက လက်ညှိုးထိုးပြီး မေးမြန်းနိုင်တယ်..
Posted by မြတ်လေးငုံ at Thursday, September 04, 2014 Links to this post
Posted by မြတ်လေးငုံ at Tuesday, September 02, 2014 Links to this post
ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် လား ပြည်ထောင်စု ခြိမ်းခြောက်ပွဲ ကော်မရှင်(နေပြည်တော်)လား မသိ ပြည်သူလူထု ခေါင်းဆောင်ကို သတိပေးလိုက်တဲ့ စာ ဆိုပဲ.. ကျမတို့ ပြည်သူတွေပဲ ဒီစာကို ဖတ်ပြီးလေ့လာ သုံးသပ်ဝေဖန်ကြတာပေါ့
Posted by မြတ်လေးငုံ at Monday, May 26, 2014 Links to this post
သတင်းစာ ဆရာကြီး ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် ရဲ့ နောက်ဆုံး နေထိုင်သွားတဲ့ အိမ်
သမိုင်းတွေ ချန်ခဲ့တဲ့ အဘ ဦးဝင်းတင်ရဲ့ အခန်းလေး ..
အဘ ဦးဝင်းတင် လမ်းလျှောက်တိုင်း ထောက်ပံ့ပေးခဲ့တဲ့ တုတ်ကောက်လေးတွေ ...
ဘဘ ရဲ့ စာအုပ်စင်
Posted by မြတ်လေးငုံ at Wednesday, April 23, 2014 Links to this post
ပြင်သစ်အဆိုတော် ဖဘဲလ်( Fabell) ရဲ့ "အဘိုး ဝင်းတင်"
ဘဘဦးဝင်းတင်၏မိသားစုထံသို့ ဘဘဦးတင်ဦးနှင့် ဦးအုန်းကြိုင် လာရောက်အားပေး
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မှ ဘဘဦးဝင်းတင် ၏ ကျန်ရစ်သူမိသားစုအား သွားရောက်အားပေးစဉ်။
သတင်းစာ ဆရာကြီး လို့ သူ့ကိုယ်သူ သတ်မှတ်ထားတဲ့ ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် ရဲ့ နာရေး သတင်းကို မန္တလေး နေ့စဉ်သတင်းစာ မှာ ပျက်ရည်ပြုသလို ခုလိုတွေ့ရတယ်
Posted by မြတ်လေးငုံ at Tuesday, April 22, 2014 Links to this post
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် သဘာပတိ ဦးဝင်းတင် ကွယ်လွန် ခြင်း အတွက် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲပချုပ် ဥက္ကဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ဝမ်းနည်းခြင်း မှတ်တမ်း
Posted by မြတ်လေးငုံ at Monday, April 21, 2014 Links to this post
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် သဘာပတိ ဦးဝင်းတင်၏ ဈာပန အစီအစဉ်
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် နယကအဖွဲ့ဝင် သတင်းစာဆရာကြီးဦးဝင်းတင် ကွယ်လွန်ခြင်း အတွက်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် နယကအဖွဲ့ဝင်ဦးတင်ဦး ရဲ့ဝမ်းနည်းမှတ်တမ်း
ဒီအိမ်လေးကလည်း ဒီမိုကရေစီ သမိုင်း အတွက် ပြတိုက်တခု ..ဘဘ ဦးဝင်းတင် နောက်ဆုံး နေခဲ့တဲ့ သူ၏ အိမ်လေးပါ ။
ဘဘ ဦးဝင်းတင် ၏ နောက်ဆုံး ပုံရိပ်
သူ...သူ...သူ.. ရှင်သန်ခြင်းရက်မြတ်မှာ အပြီးသတ် ပျံထွက်သွားခဲ့ပါပြီ...။
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် စတင်တည်ထောင်ကတည်းက အမြဲတန်းတွေ့နေမြင်နေ ဆက်ဆံခဲ့ရတဲ့ ခေါင်းဆောင်
ေေေေေေေ ဒေါ်ါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နည်းတူ လူငယ်များအပေါ်ယုံကြည်အားထားကာ တာဝန်ခံအားပေးသူ…
နိုင်ငံရေးသမားအဖြစ် နှုတ်ကမဖွင့်ပြောသော်လည်း မြန်မာ့နိုင်ငံရေး နိုင်ငံတကာနိုင်ငံရေးများ ပြောဆိုဆွေးနွေး
မှုများတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင် လေးစားအားထားရသူ…
ကျွန်တော်တို့ထက် လပိုင်းစောပြီး အင်းစိန်အကျဉ်းထောင်ကို ရောက်ရှိနေခဲ့သူ…
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအချင်းချင်းရဲ့ ယုံကြည်လေးစားခံရမှုကို ပိုမိုရရှိသူ….
စစ်အစိုးရအလိုကျ မတရားသဖြင့် နှိပ်စက်အုပ်ချုပ်တဲ့ ထောင်အာဏာပိုင်တွေကို “နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ အခွင့်အရေးများ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးကော်မတီ”ကို အကျဉ်းထောင်ထဲတွင် ဦးဆောင်ဖွဲ့စည်းသူ…
ပြည်သူလူထုကို အသိပညာအလင်းပွင့်လင်းစေဘို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ တသက်လုံးသတင်းစာဆရာဘ၀နဲ့နေလာသူပီပီ အကျဉ်းထောင်ထဲမှာ မတရားဖမ်းဆီးခံရပြီး အပြင်လောကနဲ့အဆက်ဖြတ်ခံထားရတဲ့ ဘ၀တူနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကို မျက်မှောက်သတင်းတွေရရှိအောင် စီစဉ်ကြိုးစားခဲ့သူ…
ခဲဆံတချောင်း၊ စာရွက်အပိုင်းတစလောက် လက်ဝယ်တွေ့ရှိရုံမျှဖြင့် ထောင်ဒဏ်အပြစ်ထပ်မံအပြစ်ပေးနေသော အကျဉ်းထောင်တွင်း နိုင်ငံရေးသတင်းဂျာနယ်များ၊ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် စိန်ရတုအခမ်းအနားအမှတ်တရဂျာနယ်တို့ကို အားလုံးနှင့်ပူးပေါင်းကာ အရဲစွန့်ဦးဆောင်တည်းဖြတ် ထုတ်ဝေခဲ့သူ….
စစ်အစိုးရနဲ့ ထောင်အာဏာပိုင်တွေရဲ့ ပြည်သူလူထုနဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေ အပေါ်မှာ အခုလိုမတရားနှိပ်စက်မှုတွေကို ကမ္ဘာကသိအောင် ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံကို တိုင်ကြားနိုင်ဘို့အတွက် အကျဉ်းထောင်တွင်းမှာနေထိုင်လျှက် အချက်အလက်များစုဆောင်းကာ ရေးသားပြုစု ဘာသာပြန်ကာ အောင်မြင်စွာဦးဆောင်ပြင်ဆင်နိုင်သူ….
(မရှိသလောက်ကို)ဆိုးဝါးလှတဲ့ ထောင်တွင်းကျန်းမာရေးကုသမှုတွေကို အာဏာပိုင်တွေမသိအောင် နည်းလမ်းမျိုးစုံနဲ့ ဆေးဝါးများစုဆောင်းကာ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအချင်းချင်းစောင့်ရှောက်မှုပေးနိုင်ဘို့
ဒီဆောင်ရွက်မှုအားလုံးကို ထောင်အာဏာပိုင်များသိရှိသွားခဲ့တဲ့အခါ တခြားသောနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများနဲ့အတူ နှစ်ရှည်ထောင်ဒဏ် ထပ်မံချမှတ်ခံရသူ....
ဘ၀တလျှောက်လုံး အာဏာရှင်အုပ်စိုးသူအဆက်ဆက်ရဲ့ အငြိုးအတေးအထားခံရသူဖြစ်သည့်အလျောက် ထောင်တွင်းနေထိုင်စဉ်ကာလအတွင်း ဆေးဝါးကု
သမှုများ ကောင်းမွန်စွာမခံယူရသူ…. ရောဂါဘယများ တိုးပွားလာသော်လည်း ဒူးထောက်ကာ ကုသခံခွင့်မတောင်းဆိုခဲ့သူ…
ထောင်လွတ်ရက်စေ့သောလည်း ပုဒ်မ၁၀(က)နှင့် ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းခံရသော်လည်း မိမိအားလွှတ်ပေးဘို့ အသနားခံရန် မည်သည့်အခါမျှ မတွေးခဲ့သူ…
၁၉၈၈မှ ယခုအပြီးပျံသန်းချိန်အထိ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်၊ ဘဘဦးတင်ဦး၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပါအ၀င် အဖွဲ့ဝင်အားလုံးအပေါ်သစ္စာရှိသွားသူ….
မိမိကိုယ်တိုင်နှင့် အမိမြန်မာပြည်ကြီး “လွတ်မြောက်ပြီ”ဟု…အပြီးပျံချိန်အထိ ပြောမသွားသည့်သူ….။
ကွန်ပျူတာ အင်တာနက် စက္ကူစာမျက်နှာများအပြင် လောကစာမျက်နှာများမှာပင် မဆံ့မည့်သူ…….။
ဧပရယ် ၂၁၊ ၂၀၁၄ (၁၅၁၀)နာရီ
Posted by မြတ်လေးငုံ at Thursday, April 10, 2014 Links to this post
စစ်တွေမြို့တွင် အကြမ်းဖက်မှုများဖြစ်ပွား.. ဒေါသထွက်နေသော ဒေသခံများက ကုလနှင့် အိုင်အင်န်ဂျီအိုဝန်ထမ်းများ၏ ရုံးနှင့်နေအိမ် ၃၀ ခန့်ကို ဖျက်ဆီး
အိုင်အင်န်ဂျီအိုတစ်ခုမှ နိုင်ငံခြားသူ ဝန်ထမ်းတစ်ဦးက သာသနာ့အလံကို မဖွယ်မရာ ပြုလုပ်သည်ဟု သတင်းများထွက်ပေါ်ရာမှတစ်ဆင့် စစ်တွေမြို့ တွင် ရုန်းရင်းဆန်ခတ်မှုများ ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များက သေနတ်ဖြင့် အကြိမ်ကြိမ် မိုးပေါ်ထောင်၍ ပစ်ဖောက်ထိန်းသိမ်းခဲ့ရကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
မတ်လ ၂၆ ရက် ညပိုင်းမှ စတင်ခဲ့သော ရုန်းရင်းဆန်ခတ်မှုများကြောင့် ကုလနှင့် အိုင်အင်န်ဂျီအိုအဖွဲ့အစည်းများ၏ နေအိမ်၊ ရုံးအဆောက်အအုံ ၃၀ ခန့် ပျက်စီးခဲ့ပြီး နိုင်ငံခြားသားများအပါအဝင် ဝန်ထမ်း ၇၄ ဦးကို လုံခြုံရေးအစောင့်အရှောက်ဖြင့် ထားရကာ အချို့ကို ရန်ကုန်မြို့သို့ ပို့ဆောင်လိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်း ရခိုင်ပြည်နယ် ရဲတပ်ဖွဲ့မှ သတင်းရရှိသည်။
ပဋိပက္ခဖြစ်စဉ်တွင် စတင်ပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့သော အိုင်အင်န်ဂျီအိုဝန်ထမ်း နိုင်ငံခြားသူနှင့် ၎င်း၏ခင်ပွန်းတို့ကို ရန်ကုန်သို့ ပို့လိုက်ပြီဟု အစိုးရတာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောပြီး ရဲတပ်ဖွဲ့ကမူ စစ်တွေမြို့တွင် ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ထားကြောင်း ပြောသည်။
ရုန်းရင်းဆန်ခတ်မှုများကြောင့် မတ်လ ၂၆ ရက် ညပိုင်းမှစတင်၍ မတ်လ ၂၇ ရက် ညနေအထိ လေးကြိမ်၊ လေးနေရာခန့် သေနတ်မိုးပေါ်ထောင်၍ ပစ်ခတ်လူစုခွဲခဲ့ရပြီး ပုဒ်မ ၁၄၄ ညမထွက်ရအမိန့်ကို နံနက် ၆ နာရီမှ ည ၆ နာရီအထိ အချိန်တိုးမြှင့်လိုက်ကြောင်း ရခိုင်ပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ အရာရှိတစ်ဦးက ပြောသည်။
ယခင်က စစ်တွေမြို့တွင် ပုဒ်မ ၁၄၄ ကို ည ၁၂ မှ နံနက် ၆ နာရီထိ သတ်မှတ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။
မတ်လ ၂၆ ရက် ည ၆ နာရီကျော်တွင် စစ်တွေမြို့ရှိ Malteser International မှ နိုင်ငံခြားသူ ဝန်ထမ်းတစ်ဦးက ၎င်းတို့ ငှားရမ်းနေထိုင်ရာ နေအိမ်တွင် လွှင့်ထူထားသော သာသနာ့အလံကို ဖြုတ်ချ၍ ဘောင်းဘီခါးကြားထဲတွင် ထိုးထည့်ကာ ထဘီကဲ့သို့ ပတ်သွားသည်ဟု သတင်းများ ထွက်ပေါ်လာရာမှ လူစုလူဝေး စတင်ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ယင်းသာသနာ့အလံသည် သန်းခေါင်စာရင်းကို သပိတ်မှောက်သည့်အနေဖြင့် လွှင့်ထူထားခြင်းဖြစ်ပြီး အဆိုပါ နိုင်ငံခြားသူက ထဘီကဲ့သို့ ဝတ်ဆင်၍ လမ်းပေါ်လျှောက်သွားနေသည်ကို ဒေသခံအချို့က မြင်တွေ့ရာမှ သတင်းပျံ့နှံ့ပြီး ည ၈နာရီခန့်တွင် Malteser အဖွဲ့နေအိမ်ရှေ့တွင် လူရာဂဏန်းခန့် စုဝေးလာပြီး ခဲများဖြင့် စတင်ပစ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဒေသခံများက ပြောသည်။
သို့သော် Malteser International ၏ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ Johannes Kaltenbach ကမူ အိမ်ဝန်ထမ်းတစ်ဦးလွှင့်ထူထားသော သာသနာ့အလံကို ၎င်းတို့ Pro-gramme Coordinator က အဖွဲ့အစည်း၏ ဘာသာရေး၊ နိုင်ငံရေးနှင့် အကူအညီပေးရေးလုပ်ငန်းများကို မရောထွေးစေသည့် မူဝါဒအရ ဖယ်ရှားခဲ့ခြင်းသာဖြစ်ပြီး မဖွယ်မရာ ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းမဟုတ်ကြောင်း DVB သတင်းဌာနသို့ ပြောကြားထားသည်။
ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များက လာရောက်ထိန်းသိမ်းခဲ့သော်လည်း လူထုအင်အားထောင်ဂဏန်းထိ ရောက်ရှိလာပြီး အခြားအင်န်ဂျီအိုရုံးများကိုပါ ခဲဖြင့်ပစ်ပေါက်မှုများ ရှိလာသည့်အတွက် ည ၁၁ နာရီ ကျော် ၁၂ နာရီခန့်တွင် သေနတ်အချက် ၃၀ ခန့် ပစ်ပေါက်လူစုခွဲခဲ့ရကြောင်း ရခိုင်ပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှ သတင်းရရှိသည်။
‘‘အိမ်ထဲမှာ ပိတ်မိနေတဲ့ နိုင်ငံခြားသား၊ မြန်မာနိုင်ငံသား ၁၁ ဦးကို ခေါ်ထုတ်ပြီးပါပြီ။ မိုးပေါ်ပစ်လူစုခွဲခဲ့ရတယ်။ ထိခိုက် ဒဏ်ရာရတာမရှိပါဘူး’’ဟု ရခိုင်ပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ အရာရှိတစ်ဦး က မတ်လ ၂၆ ရက် ညဥ့်သန်းခေါင်ကျော်တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
စစ်တွေဒေသခံပြည်သူများက ယင်းနိုင်ငံခြားသူသည် သာသနာ့အလံကို မဖွယ်မရာလုပ် စော်ကားသည့်အတွက် ဥပဒေနှင့် အညီ အရေးယူပေးရန် လိုလား၍ စတင်တောင်းဆိုခဲ့ခြင်းသာဖြစ်ပြီး ယခင်ကပင် အိုင်အင်န်ဂျီအိုများအပေါ် မယုံကြည့်သည့်အတွက် ၎င်း၏လုပ်ရပ်မှာ ပဋိပက္ခများကို လှုံ့ဆော်သလိုဖြစ်နေကြောင်း ပြောသည်။
မတ်လ ၂၇ ရက် နံနက်ပိုင်းတွင်လည်း သာသနာ့အလံကို မဖွယ်မရာပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းကြောင့် မကျေမနပ်ဖြစ်နေသည့် ဒေသခံများ ပြန်လည်စုဝေးလာပြီး ကုလ လက်အောက်ခံအဖွဲ့အစည်းများ အပါအ၀င် အိုင်အင်န်ဂျီအိုအဖွဲ့ နေအိမ်များ၊ ရုံးများကို ခဲများဖြင့် ပစ်ပေါက်ဖျက်ဆီးခဲ့ကြောင်း ရခိုင်ပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှ သတင်းရရှိသည်။
‘‘ဒီနေရာမှာစုလိုက်၊ လုံခြုံရေးတွေသွားလိုက်၊ နောက်တစ်နေရာမှာဖြစ်လိုက်ဆိုတော့ နည်းနည်း အခက်အခဲရှိပါတယ်’’ဟု ရခိုင်ပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ အရာရှိတစ်ဦးကပြောသည်။
မတ်လ ၂၆ ရက် ညပိုင်းမှ စတင်၍ မတ်လ ၂၇ ရက် ညနေပိုင်းအထိ နေအိမ် ၃၀ ခန့် ဖျက်ဆီးခံခဲ့ရကြောင်း သတင်းရရှိသည်။ ထို့အပြင် လုံခြုံရေးအခြေအနေအရ ပုဒ်မ ၁၄၄ ညမထွက်ရအမိန့်ကိုလည်း အချိန်တိုးမြှင့်ခဲ့ကြောင်း ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့မှ သတင်းရရှိသည်။
‘‘ဒီနေ့အခြေအနေကတော့ အသေးစိတ်မသိရသေးဘူး။ အိုင်အင်န်ဂျီအိုတချို့လည်း ရန်ကုန်ပြန်ပါ ပြီ။ ပုဒ်မ ၁၄၄ ကို မနက် ၆နာရီ ည ၆နာရီတိုးလိုက်တယ်’’ဟု ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံ ဦးဝင်းမြိုင်က မတ်လ ၂၇ ရက် ညနေပိုင်းက ပြောသည်။
ယူအင်န်နှင့် အိုင်အင်န်ဂျီအိုများမှ ၀န်ထမ်းများအား ၎င်းတို့ဆန္ဒအရ စစ်တွေဟိုတယ်တွင် ၂၅ ဦး၊ ရဲတပ်ရင်း ရိပ်သာတွင် ၄၀ ဦးကို လုံခြုံရေးဖြင့် စောင့်ရှောက်ထားပြီး ၉ ဦးမှာ ရန်ကုန်မြို့သို့ လေကြောင်းခရီးဖြင့် ပို့ဆောင်လိုက်ကြောင်း ရခိုင်ပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့အရာရှိတစ်ဦးက မတ်လ ၂၇ ရက် ည ၈ နာရီကျော်တွင် ပြောသည်။
‘‘ဒီနေ့ သုံးကြိမ် သုံးနေရာလောက် မိုးပေါ်ထောင်ပစ် လူခွဲခဲ့ရပါတယ်’’ဟု အထက်ပါအရာရှိကဆိုသည်။
အဆိုပါ သာသနာ့အလံကို ဖြုတ်ချခဲ့သည်ဟု ဆိုသော Malteser ၀န်ထမ်းမှာ မည်သည့် နိုင်ငံသားဖြစ်သည်ကို ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့သို့ ဆက်သွယ်မေး မြန်းသော်လည်း အတည်ပြု ချက်မရသေးပေ။
မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အမေရိကန်သံရုံးမှလည်း နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများကို ပစ်မှတ်ထားသည့် လူအုပ်စုဖွဲ့အကြမ်းဖက်မှုများကြောင့် အနည်းဆုံး အမေရိကန်နိုင်ငံသား သုံးဦး ပါသော အိုင်အင်န်ဂျီအိုဝန်ထမ်းများကို ဘေးကင်းလုံခြုံရာသို့ ရွှေ့ပြောင်းပေးခဲ့ရသည့် ယမန်နေ့က စစ်တွေမြို့တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော ဖြစ်ရပ်များအပေါ် လေးလေးနက်နက်စိုးရိမ်ကြောင်း မတ်လ ၂၇ရက်က သတင်းထုတ်ပြန်သည်။
တည်ငြိမ်သည့်ငြိမ်းချမ်းရေးနှ့င် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို ဖန်တီး ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ပဋိပက္ခများကို ရေရှည်ခိုင်မာသည့်ဖြေရှင်းနည်းဖြင့် ဆောင်ရွက်သွားရန်လည်း ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့သို့ ဆက်လက်တိုက်တွန်းသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ကြေညာချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
ထို့အပြင် ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့နှင့် ဗြိတိသျှသံရုံးတို့ကလည်း စစ်တွေမြို့တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော ရုန်းရင်းဆန်ခတ်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ လေးလေးနက်နက်စိုးရိမ်ပူပန်ကြောင်း ကြေညာချက်အသီးသီး ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုများဆိုင်ရာ ၀န်ထမ်းများအနေဖြင့် လုပ်ငန်းများကို အဟန့်အတားမရှိ လုံခြုံစိတ်ချစွာဖြင့် ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်မှာ အဓိကအကြောင်းအရာဖြစ်ပြီး ဗြိတိန်အနေဖြင့် အခြေအနေကို နီးကပ်စွာစောင့်ကြည့်နေမည်ဖြစ်ကြောင်း ဗြိတိန်သံရုံးက မတ်လ ၂၇ရက်တွင် သတင်းထုတ်ပြန်သည်။
ကုလအပါအ၀င် နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများ၏ နေအိမ်နှင့် ရုံး သုံးဆယ်ခန့် ဖျက်ဆီးခံခဲ့ရပြီး ပုဒ်မ ၁၄၄ အချိန်တိုးမြှင့်လိုက်မှုကြောင့် အခြေအနေ ငြိမ်သက်သွားပြီဖြစ်ကြောင်း စစ်တွေမြို့မိမြို့ဖ ဦးသန်းထွန်းက မတ်လ ၂၇ ရက် ညပိုင်းကပြောသည်။
ထို့ပြင် လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့များက ပစ်ခတ်မှုကြောင့် ခြောက်နှစ်အရွယ် မိန်းကလေးငယ်တစ်ဦး သေဆုံးခဲ့ကြောင်း သတင်းများထွက်ပေါ်နေသော်လည်း ရဲတပ်ဖွဲ့နှင့် ပြည်နယ်အစိုးရက အတည်ပြုချက်မပေးပေ။
ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ကုလအပါအ၀င် အိုင်အင်န်ဂျီအိုအဖွဲ့အစည်း ခြောက်ဆယ်ကျော်ရှိပြီး အစိုးရနှင့် နားလည်မှုစာချွန်လွှာထိုး လုပ်ကိုင်နေသော အဖွဲ့အစည်း (၁၅)ဖွဲ့ ပါဝင်ကြောင်း ပြည်ထောင်စုအစိုးရက တရားဝင်ပြောကြားထားသည်။
စစ်တွေမြို့တွင် ဖြစ်ပွားသောအကြမ်းဖက်မှုများအတွက် အမေရိကန်နှင့် ဗြိတိန်သံရုံး၊ ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့တို့က အခြေအနေကို အထူးစိုးရိမ်ကြောင်း မတ်လ ၂၇ ရက်တွင် ကြေညာချက် အသီးသီး ထုတ်ပြန်သည်။
အကြမ်းဖက်မှုများကြောင့် ကုလနှင့် အိုင်အင်န်ဂျီအို အဖွဲ့အစည်းများ၏ နေအိမ်နှင့် ရုံး ၃၀ခန့်ပျက်စီးပြီး နိုင်ငံခြားသားများအပါအ၀င် ၀န်ထမ်း ၇၄ ဦး လုံခြုံရေးအတွက် အစိုးရက ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ထားရသည်။
မတ်လ ၂၇ ရက်မှစတင်၍ စစ်တွေမြို့တွင် ည ၆ နာရီမှ နံနက်၆ နာရီထိ ညမထွက်ရအမိန့် အရှိန်တိုးမြင့်လိုက်သည်။
အကြမ်းဖက်မှုများဖြစ်ပွားစဉ် လေးနေရာခန့်တွင် သေနတ်ဖြင့်မိုးပေါ်ထောင်၍ ပစ်ကာ လူစုခွဲခဲ့သည်။
Posted by မြတ်လေးငုံ at Friday, March 28, 2014 Links to this post
Posted by မြတ်လေးငုံ at Wednesday, March 26, 2014 Links to this post
တပ်မတော်ရဲ့ဖခင်ကြီး ဗိုလ်ချူပ်အောင်ဆန်း ပြောကြားခဲ့သော တပ်မတော်ဆိုသည်မှာ
Posted by မြတ်လေးငုံ at Wednesday, February 12, 2014 Links to this post
အဓမ္မဖျက်ဆီးဖယ်ရှားခြင်းခံလိုက်ရသော လှည်းကူးမြို့နယ် သမီးလေးရွာသူရွာသား များ အခြေအနေမှန်ပါ
Posted by မြတ်လေးငုံ at Sunday, February 09, 2014 Links to this post
Unity Journal အယ်ဒီတာချုပ် အား သတင်းတပ်ဖွဲ့ မှ ပြီးခဲ့ သည့် မိနစ် ပိုင်းက လာရောက်ခေါ်ဆောင်သွား
Unity journal တွင်ဖေါ်ပြ ခဲ့သောလျှိုဝှတ် ဓါတုလက်နက်စက်ရုံသတင်းဆောင်းပါးနှင့်စပ်လျှင်း၍ အရေးယူဆောင်ရွက်မှု ဟုယူဆရသော စစ်ဆေးမှုများကို အာဏာပိုင်များ ကဆောင်ရွက်လျှက်ရှိပြီးယနေ့ ည တွင် ပေါက်မြို့ နေ Unity journal သတင်းထောက် ကိုလူမော်နိုင် အား သက်ဆိုင်ရာ လာရောက် ခေါ်ဆောင် သွားကြောင်းနှင့် ၊ အခြား ရန်ကုန်နေ သတင်းထောက် ၃ ဦး ၏နေအိမ်များသို့ ယနေ့ ညတွင် ဝင်ရောက်စစ်ဆေးမှု များရှိကြောင်း ၄င်း Unity Journal အယ်ဒီတာ ဖြစ်သူ ကိုတင်ဆန်း မှပြောကြားပါသည်။
Unity Journal အယ်ဒီတာချုပ် အား သတင်းတပ်ဖွဲ့ မှ ပြီးခဲ့ သည့် မိနစ် ပိုင်းက လာရောက်ခေါ်ဆောင်သွားပြီဟု သိရှိရသည်။
Posted by မြတ်လေးငုံ at Saturday, February 01, 2014 Links to this post
Posted by မြတ်လေးငုံ at Thursday, January 30, 2014 Links to this post
ဘုန်းကြီးဆိုတာ ရန်ဖြစ်ရတဲ့ အမျိုးမဟုတ်ဘူး၊ ရန်ဖြစ်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေကို အကာအကွယ် ပေးရမယ်၊
မင်းတို့ မကြာမီ ရွေးကောက်ပွဲတွေ ဘာတွေ လုပ်လိမ့်မယ်၊
အဲဒီတော့ ရွေးကောက်ပွဲလုပ်တာ သူတို့ဟာ သူတို့ လုပ်တာ၊ မင်းတို့နဲ့ ဘာမှ မဆိုင်ဘူး၊
ဘယ်ပါတီ မဲထည့်ပါ၊ ဟိုပါတီ မဲထည့်ပါ၊ အဲသလို စသည်ဖြင့် ဘယ်တော့မှ မပြောနဲ့၊ နိုင်ငံရေး မလုပ်ရဘူးလို့ မဆိုဘူး၊
နိုင်ငံရေးက လုပ်ကို လုပ်ရမယ်၊ ဒါပေမဲ့ နိုင်ငံရေးလုပ်တယ်ဆိုတာ တစ်ဖက်သတ် လုပ်လို့မရဘူး၊ ဒါကြောင့်မို့လို့ တစ်ဖက်သတ်အနေနဲ့ ဘယ်ပါတီ မဲထည့်ပါ စသည်ဖြင့် မင်းတို့ တောရွာတွေမှာလည်း ဘယ်တော့မှ မပြောနဲ့။
ပြီးတော့ များသောအားဖြင့် ပါတီစုံ ဒီမိုကရေစီ ရွေးကောက်ပွဲတို့ ဘာတို့မှာ ဒို့ဗမာပြည်က ရန်ဖြစ်တတ်တယ်၊ လူသတ်မှုတွေ ဘာတွေ ဖြစ်တတ်တယ်၊ မင်းတို့ အရင်လဲ ပြောပြီးပြီ၊
မင်းလှ လေးလောင်းပြိုင်တူ၊ အဲဒါတွေ ရှိတယ်၊ ဒီတော့ ဒါမျိုးတွေ မဖြစ်အောင် ကိုယ့်ရွာကို တားပါ။ ကိုယ့်ရွာက ဒကာဒကာမတွေကို ရန်မဖြစ်ကြနဲ့၊ မဲရွေးပွဲနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ရန်မဖြစ်နဲ့၊ ညီညီညွတ်ညွတ် ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ ပါတီ ကိုယ့်ဟာကို မဲပေးကြ စသည်ဖြင့် အဲသလို အသိညာဏ်ပေးပါ။ ရန်ဖြစ်တဲ့အထဲ ကိုယ်မပါပါနဲ့။
ဘုန်းကြီးဆိုတာ ရန်ဖြစ်ရတဲ့ အမျိုးမဟုတ်ဘူး၊ ရန်ဖြစ်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေကို အကာအကွယ် ပေးရမယ်၊ ရန်ဖြစ်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေကို ငြိမ်းချမ်းသွားအောင် လုပ်ရတဲ့ လူတန်းစားထဲ ရောက်သွားပြီ၊ အဲဒါ ကိုယ့်အဆင့်အတန်းကို အမြဲတမ်း မှတ်ထား။
ဒို့က ကိုယ်တိုင် ရန်ပွဲထဲ ပါဘို့ မဟုတ်ဘူး၊ ရန်ပွဲတွေကို ငြိမ်းအောင် လုပ်ပေးရမယ့် တာဝန်သာ ရှိတယ်၊ အဲဒီ ကိုယ့်တာဝန်ကိုလည်းပဲ အမြဲတမ်း မှတ်ပြီးတော့ထားပါ။
မစိုးရိမ်တိုက်သစ်၊ မဟာအောင်မြေမြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့
အမေး။ ။ ဘုန်းဘုန်းဘုရား။ သံဃာတော်တွေအတွက် သပိတ် ကို အမဲရောင်အဖြစ် ဘယ်သူ သတ်မှတ်တာလဲ ဘုရား။ သတ်မှတ်တဲ့အချိန်ကာလနှင့် ရည်ရွယ်ချက်ကို တပည့်တော် သိလိုပါတယ် ဘုရား။ နောက်ပိုင်းမှာမြသပိတ် လို အစိမ်းရောင်တွေ ပေါ်လာတာလေးလည်း တပည့်တော်သိလိုပါတယ်ဘုရား။
အဖြေ။ ။ သပိတ်အကြောင်းနဲ့စပ်ပြီး အကျယ်တ၀င့် ပြောချင်တယ်။ဘုရားအလောင်းတော် တောထွက်တော် မူတော့ ဃဋိကာရဗြဟ္မာကြီးက ပရိက္ခရာလှူဒါန်းပါတယ်။ ဒီပရိက္ခရာထဲမှာ သပိတ်လည်း ပါပါတယ်။
ဗြဟ္မာလှူတဲ့သပိတ်ဟာ ဘာနဲ့လုပ်ထားတယ်ဆိုတာ တိတိကျကျ မဖေါ်ပေမဲ့ သုဇာတာ သဌေး သမီး နို့ဃနာဆွမ်းလှူဒါန်းတဲ့ကာလမှာ (ဃဋိကာရမဟာဗြဟ္မုနော ဒိန္ဒော မတ္တိကာပတ္တော)
ဗြဟ္မာကြီးလှူဒါန်းတာဟာ မြေဖြင့်ပြီးတဲ့ သပိတ်(မြေသပိတ်)လို့ ဆိုပါတယ်။
ဘုရားလောင်းတော်ဟာ ဒုက္ကရစရိယာအကျင့် ကျင့်နေတဲ့ကာလအတွင်း ဗြဟ္မာလှူတဲ့ မြေသပိတ်နဲ့ မကင်းခဲ့ပါ။ သို့သော်လည်း သုဇာတာသူဌေးသမီး နို့ဃနာဆွမ်းလှူဒါန်းဖို့ လာတဲ့ အခါကျမှ မြေသပိတ်ဟာ အလိုလို ကွယ်ပျောက်သွားခဲ့တယ်။ ဘုရားလောင်းတော်ဟာ မဟာသက္ကရာဇ် (၁၀၃)ခုနှစ် ကဆုန်လပြည့်နေ့မှာ ဘုရားအဖြစ်သို့ ရောက်တော်မူပါတယ်။
အဲဒီကနေ သတ္တာသတ္တဟစံတော်မူကာ နောက်ဆုံး ရာဇာယတနသတ္တာဟ စံနေတော်မူတဲ့အချိန်မှာ
နတ်မင်းကြီးလေးပါးက (ဣန္ဒနီလမဏိမယေ ပတ္တေ)မြဖြင့်ပြီးတဲ့ သိပတ်(မြသပိတ်)ကို ကပ်လှူကြပါတယ်။
ဘုရားရှင်က ထိုမြသပိတ်ကို လက်မခံဘူး။ တစ်ဖန် ပဲနောက်အဆင်းရှိတဲ့ ကျောက်နဲ့လုပ်ထားတဲ့
သပိတ်လေးလုံးကို ဆက်ကပ်တော့မှ လက်ခံတော်မူပါတယ်။
ဘုရားရှင်က ထိုပဲနောက်အဆင်းရှိတဲ့ သပိတ်လေးလုံးကို ဆင့်ထားပြီး အဓိဋ္ဌာန်တော်မူရာ သပိတ်လေးလုံးကနေ အနားရစ်လေးရစ်ပါတဲ့သပိတ်တစ်လုံးတည်း မြင်တွေ့ရပါတယ်။
ဒါကြောင့် ဘုရားရဲ့သပိတ်တော်အရောင်ဟာ ပဲနောက်အဆင်းရှိတဲ့ (အမဲ)ရောင်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ဖန် ပါတိမောက်ဘာသာဋီကာမှာ သပိတ်နဲ့စပ်ပြီးမြေသပိတ် သံပိတ် နှစ်မျိူးသာ အပ်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ဒီနှစ်မျိူးမှာ မြေသပိတ်ကို (၂)ကြိမ်မီးဖုတ်ပြီး သံသပိတ် ကို (၅)ကြိမ် မီးဖုတ်ရမယ်လို့ အဋ္ဌကထာက ဆိုထားပါတယ်။
ဒီလို မီးဖုတ်ရတာက ဖြူကြောင်ကြောင် အဆင်းမရှိစေဘဲ ညိုမှောင်မှောင် အဆင်းရှိစေလိုရင်းဖြစ်တယ်။
သပိတ်အမဲရောင်ဖြစ်အောင် ပြုလုပ်ရခြင်းရည်ရွယ်ချက်မှာ (သမဏသာရုပ္ပေန- ရဟန်းတို့ အား လျောက်ပတ်သော အားဖြင့်၊ ပက္ကံ-ကျက်ပြီးသော)ဟုဆိုထားတဲ့အတွက် သမဏ သာရုပ္ပဖြစ်အောင် (ရဟန်းများ ကြည်ညိုဖွယ် ဖြစ်အောင်) ဖြစ်ပါတယ်။
သတ်မှတ်တဲ့ကာလ ဘုရားအလောင်းတော် ဘုရားအဖြစ်သို့ ရောက်တော်မူတာက မဟာသက္ကရာဇ်(၁၀၃)ခုနှစ်၊ ကဆုန်လပြည့်နေ့ဖြစ်ပြီး၊ သတ္တာသတ္တာဟ (၄၉)ရက်အကြာ ၀ါဆိုလဆန်း(၄)ရက်နေ့ခန့်မှာ နတ်မင်းကြီးလေးဦး၏ ပဲနောက် အဆင်းရှိ သပိတ်ကို အလှူခံယူတော်မူတဲ့အတွက် သပိတ်သတ်မှာရာကာလကို မဟာသက္ကရာဇ် (၁၀၃)ခုနှစ်၊ ၀ါဆိုလဆန်းပိုင်းက စတင်ခဲ့တယ်လို့ ယူဆရပါတယ်။
မြသပိတ်လို အစိမ်းရောင်တွေ ပေါ်လာတာကိုပြောရမယ်ဆိုရင် ဘုရားဖြစ်တော်မူပြီး (၄၉)ရက်ခန့်အကြာမှာ နတ်မင်းကြီးလေးပါးက ဘုရားအား ပထမအကြိမ် မြသပိတ်လှူဒါန်းတာကို အကြောင်းပြုပြီး နောက်ပိုင်းမှာ လူတွေက ဘုရားရုပ်ပွားတော်မြတ်အား မြသပိတ်လို အစိမ်းရောင် သပိတ်များ လှူလာကြတာ ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ ယူဆမိပါတယ်။ ယနေ့ခေတ် လှူဒါန်းနေတဲ့ သပိတ်တွေက မြသပိတ်လို့ခေါ်ကြတဲ့ ဖန်သပိတ်တွေပါ။
အဲဒီသပိတ်တွေလည်း ဘုရားအား လှူဒါန်းဖို့ရာ မသင့်တော်ဘူးလို့ ထင်ပါတယ်။
- [ ဦးကောဝိဒ(မြိတ်)]
Posted by မြတ်လေးငုံ at Tuesday, January 28, 2014 Links to this post
မြန်မာနိုင်ငံ က ဆေးတက္ကသိုလ် မှာ တက်ရောက်နေတဲ့ ဆေးကျောင်းသူကို မုဒိမ်းကျင့်ခံရတဲ့အမှု့ တရားခံ အစစ်အမှန် အမြန် ပေါ်ပေါက်ပါစေ
"မြန်မာ့တရားရေးကို စိန်ခေါ်လာတဲ့ နော်မေသူသူဇော် သေဆုံးမှု" 2013 ဧပြီလ လောက်က ဆေးဖက်ကျောင်းသူလေး တစ်ယောက်ဟာ ဘုရင့်နောင်တံတားပေါ်က ခုန်ချပြီး သတ်သေသွားတယ်လို့ ရဲတပ်ဖွဲ့က ဆိုပါတယ်။ အဲ့ဒီကျောင်းသူလေးနာမည်က နော်မေသူသူဇော်ဖြစ်ပြီး အသက် ၁၉ နှစ်သာ ရှိပါသေးတယ်။ နော်မေသူသူဇော် ရဲ့ ရည်းစားဖြစ်သူက ရဲမင်းဦးလို့ ခေါ်တဲ့ ဆေးကျောင်းသားတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ ကောင်မလေးသေတဲ့နေ့က သူဟာ သူ့ချစ်သူ ရဲမင်းဦးနဲ့ လျှောက်လည်ရာက ပြန်လာပြီး စော်ဘွားကြီးကုန်းကနေ မှော်ဘီကို ည ၇ နာရီ ၄၅ မိနစ်မှာ ပြန်သွားတယ်လို့ ရဲမင်းဦး က စစ်ချက်ပေးပါတယ်။ မေသူဇော်ရဲ့ လွယ်အိတ်ကို ဘုရင့်နောင် တံတားပေါ်မှာ လေညှင်းခံ ထွက်လာတဲ့ ရွာမရပ်ကွက်က မိန်းခလေးသုံးယောက်မှ ည ၈ နာရီအချိန်မှာ တွေ့ခဲ့တာလို့ ရဲတပ်ဖွဲ့က ဆိုပါတယ်။ ဇော်ဘွားကြီးကုန်းကနေ မှော်ဘီကို သူ့ရည်းစားရှေ့မှာ ပြန်သွားတဲ့ မိန်းခလေးဟာ ဘုရင့်နောင်တံတားပေါ်မှာ ည ၈ နာရီမှာ ဘယ်လို ကိုယ့်ဟာကိုယ် သတ်သေမလဲ ??? ဇော်ဘွားကြီးကုန်းနဲ့ ဘုရင့်နောင်ဆိုတာ ဆန့်ကျင့်ဘက်ပါ။ ရဲတပ်ဖွဲ့ကတော့ သေဆုံးသူ မိန်းခလေးဟာ ဇော်ဘွားကြီးကုန်းကလာပြီး ခရေပင်လမ်းခွဲမှာ ဆင်း၊ တက္ကစီဌားပြီး ဘုရင့်နောင်တံတားကိုလာပြီးမှ လွယ်အိတ်ကို တံတားမှာ ချပြီး မြစ်ထဲကို ခုန်ဆင်းသတ်သေတယ်လို့ ယူဆပါသတဲ့။ စော်ဘွားကြီးကုန်းကနေ ခရေပင်လမ်းခွဲကို ဟိုင်းလတ်စီးရင် အနည်းဆုံး ငါးမိနစ်နဲ့ ဆယ်မိနစ်ကြာပါတယ်။ ခရေပင်လမ်းခွဲက ဘုရင်နောင်တံတား - ပေါက်တောဝကို တက္ကစီ ဌားရင်လည်း အနည်းဆုံး ၁၅ မိနစ်က နာရီဝက်လောက်ကြာနိုင်ပါတယ်။ အင်းစိန်ပန်းခြံကစပြီး ဂုံးတံတား၊ အင်းစိန်ဈေး၊ ပေါက်တောဝ မီးပွိုင့်အထိ လမ်းတောက်လျှောက် ပွင့်နေတာတောင် ငါးမိနစ်က ဆယ်မိနစ်လောက်ထိကြာပါတယ်။ ဒီလိုဆိုရင် ည ၇ နာရီ ၄၅ မှာ ရည်းစားနဲ့ လမ်းခွဲလာတဲ့ မိန်းခလေး ည ၈ နာရီမှာ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ဘုရင့်နောင်တံတားမှာ သတ်သေတယ်ဆိုတဲ့ ရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့ ရှင်းလင်းချက်ကို လက်ခံနိုင်ဖွယ်ရှိပါသလား ??? အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ ကောင်မလေးရဲ့ အလောင်းပေါ်လာတယ်။ ရဲက နှစ်ရက်ထားပြီးတော့ ပိုင်ရှင်မဲ့ဆိုပြီး သဂြိုလ်လိုက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ဆေးရုံက သုံးရက်ထားမယ့်ဟာကို ရဲက အမိန့်စာထုတ်ပြီး သဂြိုလ်ပါသတဲ့။ ပြီးတော့မှ ရဲမင်းဦးအိမ်က အရင်သိပြီး ကောင်မလေးအိမ်ကို အကြောင်းကြားတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ကောင်မလေး တံတားမှာ ချန်ခဲ့တဲ့ အိတ်နဲ့ဖိနပ်။ အိတ်မှာ ကောင်မလေးရဲ့ ကျောင်းသားကတ်ဒ် ရှိပါတယ်။ ကျောင်းသားကတ်ဒ်ထဲမှာ နေရပ်လိပ်စာလည်း ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကောင်မလေးကို ပိုင်ရှင်မဲ့ဆိုပြီး သဂြိုလ်လိုက်ပါတယ်။ ဆေးစာကို ရေးတာက အင်းစိန်က မူ့ခင်းဆရာဝန်ကြီး ဒေါက်တာ ရဲဝင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးစာမှာတော့ ကောင်မလေးမှာ ပြင်ပဒဏ်ရာ မတွေ့ရပဲ အဆုတ်ထဲရေ၀င်ပြီး သေဆုံးတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ပြီးတော့ ကောင်မလေးဟာ အပျိုစစ်စစ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ကောင်မလေးရဲ့ အပျိုမှေးတောင် မပျက်စီးတဲ့ သဘောပေါ့။ ဒါပေမယ့် ရဲတပ်ဖွဲ့ကပေးတဲ့ ပုံ မဟုတ်ပဲ မိသားစုက စုံစမ်းပြီးရထားတဲ့ အလောင်းဘေးတိုက်ပုံ ကောင်မလေးရဲ့ နောက်ကျောမှာ သွေးစွန်းနေတယ်လို့ ယူဆနိုင်တဲ့ အနီကွက်ကို တွေ့ရသလို၊ ရဲ ကပေးတဲ့ ပုံမှာလည်း လက်ဝဲဘက် လက်ကျိုးနေတယ်လို့ ယူဆနိုင်ပါတယ်။ မူ့ခင်းဆရာဝန်ကြီးက အပျိုစစ်စစ်လို့ ထွက်ချက်ပေးပေမယ့် သေဆုံးသူရဲ့ ဖုန်းထဲမှာ သူ့ရည်းစား ရဲမင်းဦးနဲ့ ပို့ထားတဲ့ မက်ဆေခ်ျ့တွေမှာတော့ ကောင်မလေးဟာ သူ့ရည်းစားနဲ့ လွန်ကျုးထားတယ်လို့ တွေ့ရှိရပြီး ကောင်မလေးဟာ တားဆေးစားနေရပါသတဲ့။ တားဆေးစားနေရတဲ့ မိန်းခလေးဟာ အပျိုစစ်စစ်ဖြစ်ပါ့မလား ??? အမှုရှုပ်ထွေးလာပါပြီ။ ဒါဆိုဘာလို့ ရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့ မှုခင်းဆရာဝန်ကြီး၊ တရားသူကြီးတွေက ဒီလိုသံသယ၀င်စရာတွေကို သတိမပြုခဲ့ပါသလဲ ??? ဆေးကျောင်းသား ရဲမင်းဦးရဲ့ ဖခင်ဟာ GE(အင်ဂျင်နီယာ) တပ်က အရာခံဗိုလ်ကြီးတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ GE တပ်က ဆာဂျင်တွေ အင်ဂျင်နီယာတွေ ဘယ်လောက် ပိုက်ဆံရတယ်၊ ချမ်းသာတယ်ဆိုတာ နီးစပ်သူတွေ သိကြမှာပါ။ ဒါတင်မကပဲ ရဲမင်းဦးနဲ့ သေဆုံးသူကောင်မလေးတို့ဟာ အဲ့ဒီနေ့က ရွှေတိဂုံဘုရားနဲ့ Junction Square တို့ကို လည်ပတ်ခဲ့ကြပါသတဲ့။ တိတိကျကျဆို ရဲမင်းဦ သူ့ အစ်ကိုတစ်ဦးနှင့် သေဆုံးသူကောင်မလေးတို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ရဲမင်းဦးရဲ့ သူငယ်ချင်းတွေဟာ အဲ့နေ့က သေဆုံးသူကောင်မလေး ၀တ်တဲ့ ဂါဝန်နဲ့ အရောင်ကိုပါ သိကြပါသတဲ့။ ဒီအကြောင်းကို သေဆုံးသူကောင်မလေးအိမ်က ရဲမင်းဦးနဲ့ သူ့အပေါင်းအသင်းများက ကောင်မလေးကို မုဒိန်းကျင့်ပြီး သတ်ဖြတ်ကာ ကိုယ့်ကိုကိုယ် သတ်သေသလို ဇတ်လမ်းဆင်ခဲ့တယ်လို့ စွပ်စွဲခဲ့ပါတယ်။ နောက်ဆုံး သံသယဖြစ်စရာ အကောင်းဆုံးကတော့ ကောင်မလေး အလောင်းပေါ်တဲ့ လှိုင်မြစ်ကမ်းနဲ့ နှစ်လမ်းအကွာမှာ ရှိတာကတော့ လူသတ်သမားလို့ စွပ်စွဲခံရတဲ့ ကောင်မလေးရဲ့ချစ်သူ ရဲမင်းဦး ရဲ့ အိမ်ပဲ ဖြစ်ပါတော့တယ်။ ဒီလို သံသယတွေ၊ ထောက်ပြစရာတွေ လျို့ဝှက်ချက်နေတဲ့ ပြည့်လျှမ်းနေတဲ့ အမှုကို လူသေမှုဆိုပြီး အမှုပိတ်လိုက်တာဟာ ရဲတပ်ဖွဲရဲ့ စွမ်းရည်ကို ဝေဖန်စရာဖြစ်နေပြီး၊ ဆိုရှယ်မီဒီယာတွေဖြစ်တဲ့ ဖေ့ဘုတ်နဲ့ ၀က်ဘ်ဆိုက်တွေမှာ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ဝေဖန်လာကြပါတယ်။ လူအများစုကတော့ မြန်မာ့တရားစီရင်ရေးကို ကိုင်လှုပ်လာမလား ဆိုတာ စောင့်ကြည့်နေကြရင်း။ တရားဥပဒေ စိုးမိုးနိုင်ပါစေ။
မာဃ Credit to: Aye Chan Mon
Posted by မြတ်လေးငုံ at Monday, January 27, 2014 Links to this post
Posted by မြတ်လေးငုံ at Sunday, January 26, 2014 Links to this post
ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် လား ပြည်ထောင်စု...
သတင်းစာ ဆရာကြီး ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် ရဲ့ နောက်ဆုံးေ...
ပြင်သစ်အဆိုတော် ဖဘဲလ်( Fabell) ရဲ့ "အဘိုး ဝင်းတင်"...
ဘဘဦးဝင်းတင်၏မိသားစုထံသို့ ဘဘဦးတင်ဦးနှင့် ဦးအုန...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မှ ဘဘဦးဝင်းတင် ၏ ကျန်ရစ်သူမိသာ...
သတင်းစာ ဆရာကြီး လို့ သူ့ကိုယ်သူ သတ်မှတ်ထားတဲ့ ဟံသာ...
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် သဘာပတိ ဦးဝင်းတင် ကွ...
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် သဘာပတိ ဦးဝင်းတင်၏ စ...
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် နယကအဖွဲ့ဝင် သတင်းစာ...
ဒီအိမ်လေးကလည်း ဒီမိုကရေစီ သမိုင်း အတွက် ပြတိုက်တခု...
သူ...သူ...သူ.. ရှင်သန်ခြင်းရက်မြတ်မှာ အပြီးသတ် ပျံ...